Heshiiska dalalka Ethiopia iyo Eritrea ma caddeynaa in DF aysan qalad sameyn? - Caasimada Online
Home Warar Heshiiska dalalka Ethiopia iyo Eritrea ma caddeynaa in DF aysan qalad sameyn?
Heshiiska dalalka Ethiopia iyo Eritrea ma caddeynaa in DF aysan qalad sameyn?
Muqdisho (Caasimada Online) – Maalgashiga oo ah mid ay faa’ido ku raadiyaan maalgashtaha iyo la maalgeliyaha waxaa uu dhexmaraa dowlado, hay’ado iyo shaqsiyaad wax maalgashta si ay ugu faa’idaan.
Soomaaliya waxa ay kamid tahay dalalka leh Kheyraadka nuuc walba berri iyo bad, laakiin dadkii ehelka u ahaa kama faa’ideystaan mana u diyaarsana midaas.
Soomaaliya waxey heshiis maalgashi la gashay dowladda Itoobiya sanadkan 2018 kaa oo ku saabsan in Itoobiya ay maalgelishato afar dakadood oo Soomaaliya dhaca, mana ahan micnaheedu in ay la wareegayaan, kaliya waxey ku sameynayaan maalgashi waxaana bilaabanaya wax soo saar kadibna labada dal aay ka macaashaya.
Waxa Soomaalida dhibaya ayaa ah in Xabashida oo naceyb badan ay u qabaan iney hadane dalkii maalgashtaan, maadama labada dal uu dagaal xun oo ilaa imaika laga sheekeeyo dhexmaray sanadkii 1977-kii.